Busted! – Gold Channel Movies
Forewarned Murder May. 04, 2018
Treasure Island May. 04, 2018
Kwang-soo,aMurderer May. 11, 2018
Messages from the Dead May. 11, 2018
Episode5May. 18, 2018
Episode6May. 18, 2018
Episode7May. 25, 2018
Episode 8 May. 25, 2018
Episode9Jun. 01, 2018
2Season2Nov. 08, 2019
Episode3Nov. 22, 2019
Episode5Nov. 08, 2019
Episode6Nov. 08, 2019
Episode7Nov. 08, 2019
Episode 8 Nov. 08, 2019
Episode 10 Nov. 08, 2019
3Season3Jan. 22, 2021
Busted (Season -3)
GC ပရိတ်သတ်တွေစောင့်စားနေကြတဲ့ Netflix Original Variety Show ဖြစ်တဲ့ Busted (Season-3) ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Original Cast တွေဖြစ်တဲ့ ယူဂျယ်ဆော့၊ အိုဆယ်ဟွန်း၊ ဘတ်မင်ယောင်း၊ ဂင်ဆယ်ဂျောင်း၊ ဂင်ဂျုံမင်း၊ အီဆွန်းဂီနဲ့ အန်ဂျယ်ဝုတို့ပြန်လည် ပါဝင်ထားကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Schedule တွေကြပ်လို့ Season2မှာ မပါနိုင်ခဲ့တဲ့ Asian Prince အီဂွမ်ဆူလည်း ပြန်လည်ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဧည့်သည်သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း အလန်းဇယားတွေမို့ အရင် Season တွေလို ကြည့်ကောင်းမှာ အမှန်ပါပဲ။
ကေရဲ့ စုစည်းမှုနဲ့ ပေါင်းစည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒီစုံထောက်အဖွဲ့ကြီးဟာ Season3မှာရော အမှုတွေကို ဘယ်လိုမျိူး ဟာသဆန်ဆန်၊ ဖြတ်ထိုးဉာဏ်အပြည့်နဲ့ ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာကို စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကြည့်ရှုရမှာပါ။ Season 1 မှာ သေဆုံးပြီလို့ ထင်ရတဲ့ ယူဂျယ်ဆော့ဟာ Season2မှာ ပဉ္စလက်ဆန်ဆန် ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာသလိုပဲ Season2မှာ ပန်းလူသတ်သမားအဖြစ် အဆုံးသတ်သွားတဲ့ အီဆွန်းဂီကရော ဒီ season မှာ ဘယ်လိုမျိူးဇာတ်ကောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတာ ရင်ခုန်စရာပါပဲ။ ဒါ့အပြင် အီဂွမ်ဆူရဲ့ ဇာတ်ကောင် ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာမှုကိုလည်း စောင့်မျှော်ရဦးမှာပါ။
Season3ရဲ့ Main Theme က “The Potential Criminal”(ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ရာဇဝတ်ကောင်) ဖြစ်ပြီး အရင် season တွေရဲ့ အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ ပရောဂျက် D၊ ပန်းလူသတ်သမား စတာတွေနဲ့ ဘယ်လိုချိတ်ဆက်သွားမလဲ..စုံထောက်တွေရဲ့ အချင်းချင်း ဉာဏ်ရည်ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေက ဘယ်လောက်ထိ ပြင်းထန်လာဦးမလဲ..ပြီးတော့ ဒီ season မှာရော သူတို့ရဲ့ တာဝန်တွေကို အောင်မြင်အောင် ထမ်းဆောင်နိုင်ပါ့မလား ဆိုတာတွေကို GC team နဲ့အတူ ကြည့်ရှုခံစားပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။
Original title ??? ?? ?!
trump hydroxychloroquineSeptember 27, 2021Reply
bactrim dsSeptember 26, 2021Reply
prednisoneforgoutSeptember 26, 2021Reply
prednisone withdrawal interactions for prednisone
buyprovigilonlineSeptember 26, 2021Reply
accutane medicationSeptember 26, 2021Reply
modafinilgenericSeptember 26, 2021Reply
ncov chloroquineSeptember 19, 2021Reply
hydroxychloroquinemlSeptember 11, 2021Reply
doctors for hydroxychloroquine trump hydroxychloroquine hydroxy cloroquine
Kyaw ZinAugust 19, 2021Reply
Season3Links လေး
hydroxychloride 200 mgAugust 19, 2021Reply
Min Thit HtunJanuary 13, 2020Reply
????????? Adm ???????
htet aungJanuary 4, 2020Reply
season3???????????
Min Thit HtunDecember 23, 2019Reply
Se2Ep 10 ? Season2???????? ??????
gcmoviesDecember 23, 2019Reply
White SkinDecember 7, 2019Reply
Episode7lyy tin pay prr tot kyar hla nay p lyy
Su ThadarDecember 6, 2019Reply
season2???????????? ??????? admin ?????
SnikeerDecember 4, 2019Reply
season2ep7 ??? ?????????? Admin ??
KuuKooDecember 3, 2019Reply
Ep7 pls admin
SuzyNovember 27, 2019Reply
min thit htunNovember 24, 2019Reply
next episodes admin.
naythwayeNovember 23, 2019Reply
season2ep5???????????
Hinn yatiNovember 22, 2019Reply
Gdive ??? ???????? ???????????????? ????? link ?????????????????
yelinheinNovember 22, 2019Reply
gdrive ?????????? people crowded????????????????? ???????
????? link ???????????????? :'( :'(
janNovember 21, 2019Reply
MiracleNovember 20, 2019Reply
HainNovember 16, 2019Reply
JuNovember 14, 2019Reply
Su ThadarDecember 3, 2019Reply